KosmoTime: Mepụta ihe aga-eme na-edebe oge na kalịnda gị | Martech Zone
Dị ka a na onye òtù ọlụlụ na-arụ ọrụ na enterprise ụlọ ọrụ, m ụbọchị bụ a blur na kalenda m bụ a ọgbaghara - bouncing si ahịa, ka atụmatụ, na-eguzo-acha ọkụ, na onye, ​​na onye na-abụghị nzukọ na-akwụsị. N'etiti oku ndị ahụ niile, ọ dị m mkpa ịrụ ọrụ ahụ nke mụ na ndị ahịa metụtakwara!
Otu ihe m mere n’oge gara aga bụ naanị egbochi oge na kalenda m iji hụ na m ga - enweta ọrụ m rụchara ma gwa ndị ahịa anyị. Mgbe mgbochi m bịara, m na-ele akwụkwọ m tụkwasịrị obi wee malite ịkwatu ọrụ ndị pụtara ìhè.
Oge KosmoTime Oge
Oge Kosmo bụ oge njikwa ngwa na-enyere ndị ọkachamara aka ịrụ ọrụ site na itinye ọrụ na kalenda ya na atụmatụ igbochi ndọtị akpaka. KosmoTime bụ njikọ na-efu n'etiti ime ka ọrụ gị rụọ ọrụ, ịkwado ọrụ ahụ na kalenda gị, yana ị hụ na enweghị ndọpụ uche mgbe ị na-emezu ha.
Ogbe Gị Ọrụ - oru na-abụkarị micro-nzọụkwụ ka ibu oru ngo. KosmoTime-enyere gị aka iji otu ihe aga-eme na mgbe ịtọọ oge iji hụ na oru ngo ga-agwụ agwụ.
Gbochie Nsogbu Niile - KosmoTime mechie taabụ gị ma gbanyụọ ọkwa Slack gị mgbe ịmalitere ọrụ gị. Ozugbo imesiri, KosmoTime ga - emeghee taabụ na ọkwa niile
Tinye Task na Chrome - KosmoTime na-ahapụ gị ịdebanye aha URL ọ bụla ma gbanwee ya na Task na otu pịa si Google Chrome. Nwere ike mechaa nyefee ya na Sprint ma mee ya n'oge kwesịrị ekwesị, na nlezi anya ziri ezi.
Debe Kalinda gị - KosmoTime jikọtara ya na kalenda Microsoft ma ọ bụ Google gị. Tinye ọrụ ma ọ bụ ngọngọ ọrụ, dọrọ ya na kalenda gị, ịnwere ike ịgbatị oge iji gbochie oge dị ka ịchọrọ iji mezuo ọrụ gị.
Ebumnuche KosmoTime bụ iji mee ka ndị ọrụ nwee ike ịrụ ọrụ ha niile, ma na usoro a weghachite njikwa nke oge ha na nnwere onwe ha. s
Banye maka KosmoTime
Tags: ahịa agilegoogleoge oyimicrosoftnjikwa ọrụọrụ njikwa